E Gburu Mmadụ n’Otu Ememme Ncheta Ọmụmụ | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
MATIU 14:1-12 MAK 6:14-29 LUK 9:7-9
HERỌD ENYE IWU KA E GBUPỤ JỌN ONYE NA-EME BAPTIZIM ISI
Ndịozi Jizọs nọ na Galili na-ekwusa ozi ọma. Ma, onye bu ụzọ gwa ndị mmadụ banyere Jizọs enwereghị onwe ya ikwusa ozi ọma otú ahụ ha na-ekwusa. Onye ahụ bụ Jọn Onye Na-eme Baptizim. Ọ ka nọ n’ụlọ mkpọrọ kemgbe ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ afọ abụọ ugbu a.
Jọn kwuru n’ezoghị ọnụ na ọ dị njọ Eze Herọd Antipas ịkpọrọ nwunye nwanne ya nwoke bụ́ Filip lụwa. Herọd gbara nwunye mbụ ya alụkwaghịm, lụwazie Herodias. N’Iwu Mozis, bụ́ nke Herọd sịrị na ya na-eso, ndị si otú a lụọ na-akwa iko, iwu akwadoghịkwa ya. N’ihi ihe a Jọn kwuru, Herọd nyere iwu ka a tụba ya n’ụlọ mkpọrọ. Ikekwe, ọ bụ Herodias gwara ya ka ọ tụọ Jọn mkpọrọ.
Herọd amaghị ihe ọ ga-eme Jọn n’ihi na ndị mmadụ ‘weere Jọn dị ka onye amụma.’ (Matiu 14:5) Ma, Herodias anaghị eche ihe a ga-eme ya eche. O “buuru Jọn iwe n’obi.” Ọ nọdị na-achọ ihe ya ga-eme ka e gbuo ya. (Mak 6:19) N’ikpeazụ, o nwetara ohere ọ na-achọ achọ kemgbe.
Obere oge tupu e mee Ememme Ngabiga nke afọ 32, Herọd mere nnukwu ememme iji cheta ụbọchị ọmụmụ ya. Ndị niile ọkwá ha dị elu n’ọchịchị Herọd, ndị isi agha, nakwa ụmụ amaala a ma ama na Galili bịachara ememme ahụ. Mgbe a na-eme ememme ahụ, a kpọpụtara Salomi, nwa Herodias mụtaara di mbụ ya bụ́ Filip, ka ọ bịa gbaa egwú. Egwú ọ gbara tọgburu ndị bịara ememme ahụ atọgbu.
Egwú ahụ nwa ahụ a mụtaara Filip gbara tọrọ Herọd ezigbo ụtọ nke na ọ sịrị ya: “Rịọ m ihe ọ bụla ị chọrọ, m ga-enyekwa gị ya.” Ọ ṅụdịrị iyi, sị: “Ihe ọ bụla ị rịọrọ m, m ga-enye gị ya, ruo ọkara nke alaeze m.” Ma, tupu Salomi ekwuo ihe ọ bụla, ọ pụrụ gaa jụọ nne ya, sị: “Gịnị ka m ga-arịọ?”—Mak 6:22-24.
Ụdị ohere a ka Herodias nọ na-achọ kemgbe. Ọ zara nwa ya ozugbo, sị: “Isi Jọn onye na-eme baptizim.” Salomi egbughị oge bịaghachi gwa Herọd ihe ọ chọrọ ka o meere ya. Ọ sịrị ya: “Achọrọ m ka i bunye m isi Jọn Onye Na-eme Baptizim ozugbo n’efere dị mbadamba.”—Mak 6:24, 25.
Ihe a ọ rịọrọ wutere Herọd nke ukwuu. Mana, ndị bịara ememme ahụ nụrụ nkwa ahụ o kwere Salomi. Ọ ga-eme ya ihere ma ọ bụrụ na o mezughị nkwa ahụ o kwere n’agbanyeghị na ọ ga-eme ka o gbuo onye aka ya dị ọcha. N’ihi ya, Herọd zipụrụ ndị nche ya ka ha gaa n’ụlọ mkpọrọ gbute isi Jọn. O teghị aka ndị nche ahụ eburu isi Jọn n’efere lọghachi. Herọd bunyere ya Salomi, Salomi ebunye ya nne ya.
Mgbe ndị na-eso ụzọ Jọn nụrụ ihe merenụ, ha bịara buru ozu Jọn gaa lie, gazie kọọrọ Jizọs ihe merenụ.
Ka e mechara, mgbe Herọd nụrụ banyere Jizọs, na ọ na-agwọ ndị mmadụ ọrịa, na-achụpụkwa ha ndị mmụọ ọjọọ, egwu tụwara ya. Ọ nọ na-eche ma Jizọs a na-eme ihe ndị a ọ̀ bụ Jọn Onye Na-eme Baptizim ‘e si ná ndị nwụrụ anwụ kpọlite.’ (Luk 9:7) N’ihi ya, Herọd Antipas nọ na-achọsi ike otú ọ ga-esi hụ Jizọs. Ma, ihe o kwo na-achọ ịhụ ya abụghị ka o gee ntị n’ozi ọma ya. Kama, ọ chọrọ ịhụ ya iji mara ma ihe a ya na-eche ọ̀ bụ eziokwu ka ọ bụ na ọ bụghị.
Gịnị mere e ji tụọ Jọn Onye Na-eme Baptizim mkpọrọ?
Olee otú Herodias si mechaa hụ na e gburu Jọn?
Mgbe Jọn nwụchara, gịnị mere Herọd Antipas ji chọwa ịhụ Jizọs?
Gịnị Mere Ndịàmà Jehova Anaghị Eme Ememme Ncheta Ụbọchị Ọmụmụ?
Lee ihe anọ mere Chineke anaghị anabata ememme ụbọchị ọmụmụ.
Olee nsogbu ndị i nwere ike inwe ma ị kọwawara ndị ọzọ ihe i kweere? Olee otú ị ga-esi eme ya n’akpasughị ha iwe?